Senior Gray, Ube oyibo Green Ma Champagne Pink, A Ihunanya Space Ebe Ochie Na Modern Coexist
Home / Imepụta ime ụlọ / Senior Gray, Ube oyibo Green Ma Champagne Pink, A Ihunanya Space Ebe Ochie Na Modern Coexist
2020 / 10 / 16 nhazi ọkwaImepụta ime ụlọ 1850 0
Xiao Bei Imepụta Imepụta Ihe
Ga-ahụ ya n’osisi ọbụla, ifuru ọ bụla, n’ihe ọ bụla dị ndụ.
Hụ na Chineke nọ ebe niile na-enye gị nkasi obi na ume.
Onye nwe ikpe a bụ di na nwunye lụrụ ọhụrụ, ha họọrọ ụlọ a kwadebere nke ọma dị ka ụlọ mbụ ha mgbe ha lụsịrị. Oghere ahụ na-egbo mkpa nke ndụ, n'ihi ya, ọ dịghị mgbanwe ọ bụla na nhazi ahụ, naanị site na ngbanwe nke ihe ndị dị nro iji nweta otu ụdị ejiji dị mma ma mee ka ndụ dị mma.
Nzube zuru oke sitere na ihe nkiri "Princess Sissi", na ijikọta ihe nke ulo eze ochie na ihe ejiji nke oge a. Anyị na-atụ anya imepụta ọnọdụ dị mma na nke ịchọ ịhụnanya na nke ihunanya dịka okike nke ndụ ndị na-eto eto nke oge a. Advanced isi awọ, ube oyibo green, champeenu pink dị ka isi na agba, na-agbakwunye plasta edoghi na-enwe mmetụta n'echiche nke geometric Ọdịdị. Ojiji nke ihe igwe na ihe eji eme ihe n’ime oghere na-eme ka esemokwu di egwu site na ime.
Ọnụ ụzọ ahụ mepere emepe, na-eji isi awọ dị elu ewebata kabinet akpụkpọ ụkwụ + mkpuchi + akpụkpọ ụkwụ na-agbanwe mpaghara n'ozuzu ya, n'akụkụ aka ekpe nke windo ahụ na-emechi windo na-acha ọcha, n'akụkụ aka nri nke tebụl a pịrị apị maka ịkwado ihe osise. Ozugbo onye nwe ya batara n’ime ụlọ ahụ, ọ ga na-enwe mmetụta nke anwụ na-acha na mbara igwe mara mma.
Mgbidi TV mbụ na sofa mgbidi adịghị n'ọnọdụ ziri ezi, yabụ anyị gbanwere ọnọdụ ndị ahụ. Agịga isi awọ, ube oyibo acha odo odo iche na TV mgbidi, champeenu pink agba jumping sofa ndabere mgbidi, ọlaedo karịa kọlụm akara ọnwụ, nke mere na dum ohere n'afọ iri na ụma ntabi anya ike, na-eweta a kwesịrị ekwesị uche nke ọkaibe.
Geometric plasta edoghi na pink agba nkewa mgbidi maka udidi nkukota, nghọta na-ebute echiche nke mgbanwe na mmegharị. Fadị velvet dị ka ihe ọkpụkpụ mara mma, ma ọ bụghị nke mgbagwoju anya, na ụda na ọkụ na-eweta ọnọdụ dị nro na nke mara mma.
Drape nke ákwà ngebichi na-eme ka e nwee mmetụta nke ije, ebe otu sofa dị mfe ma mara mma dị ezigbo nso. Nwanyị nwe ụlọ na-a teaụkarị tii ebe a ma na-agụ magazin. Ebe a na-eme ihe nkiri sịnịma kwekọrọ n'echiche ya banyere ndụ kacha mma.
Anyị họọrọ obere tebụl gbara gburugburu iji belata mmetụta nke ịnọ n'ụlọ nri, ma gbaa ya gburugburu oche anọ iji mee ka ezinụlọ ahụ dịrị n'otu.
Ngwunye enyo nke mgbidi ahụ na-eme ka echiche nke oghere dị, na enyo enyo na-agbatị mmekọrịta chiri anya na ime ụlọ iri nri, nke nwere ememe ndụ na nkọwa.
Mgbidi dị n’azụ ụlọ ime ụlọ na-eji akara akara iji gbanwee ọnọdụ ahụ, dị ka nnukwu chocolate dị ọcha, na-eche ka nna ukwu gbazee. Ngwongwo ndị dị nro na ụcha agba niile dị n'otu, na -emepụta ohere ihi ụra mara mma ma na-ekpo ọkụ.
Bedroomlọ ime ụlọ mbụ ahụ bụ uwe eji eme ihe, anyị na-eji usoro ịcha diamond iji gbanwee nhazi ahụ. Shapeddị ọdịdị mbụ nke nwere ahịrị edogharị ghọrọ akụkụ anọ na ezi uche, site na ịhọrọ uwe, dabara adaba, maka ejiji, a na-emecha ahịrị ndị ahụ n'otu ụzọ iji mezuo mkpa nke onye nwe ya.
N’uche anyị, mmezi ụlọ a kwadebere nke ọma dabere na mkpa onye ọ bụla nwere. Ọ pụtaghị na ọ gaghị arụpụta ezigbo ihe na-enweghị mgbanwe nhazi ọ bụla.
N'oge gara aga, ọ bụ oge mbụ na akụkọ ihe mere eme nke ụlọ ọrụ ahụ nwere ike ịme mkpebi na ma ọ ga-etinye ego na ụlọ ọhụrụ.
Plan Atụmatụ Ala Mkpụrụ mbụ
▲ Na-eme atụmatụ youthazi
Typedị :lọ: ime ụlọ anọ na ime ụlọ abụọ
Servicekpụrụ Ọrụ: Nlekọta Ahụ dum
Adreesị :lọ Ọrụ: Chengdu, China China-German Commonwealth
Agencylọ Ọrụ Nhazi: Chengdu Hongfu Besam Space Design
Nke gara aga :: Kpochapụwo Black na White Grey Wood, Mfe udiri Casual | Ekike Aizhu Osote: Nnu Nwere Ike Sweettọ Mori Space, Natural Cozy Bourgeoisie Ọnọdụ | BRJ .BỌR.
Amụma nke Taiwan, Asụsụ Pụrụ Iche - Ọrụ Ọhụrụ Nke Tang Zhonghan
2020 / 11 / 17 511
Art Nke di n'elu ndu: Hefei Izakaya Restaurant | Design On The Bund
2020 / 11 / 17 529
Ndụmọdụ maka tozụrụ Fosets Kwesịrị Ekwesị
2020 / 11 / 16 573
Nke a bụ nkọwa zuru ezu banyere Ultra-Thin Stone!
2020 / 11 / 10 582
160 Square Mita Na Beijing, Ọ Na-ebi Naanị, Nke ahụ Bụ Ndụ Dị Ndụ!
2020 / 11 / 10 610
78 Square Mita Ezinụlọ nke anọ, Nke a Design bụ Senior Ma Gosikwa Big!
2020 / 11 / 06 613
Pịa ịkagbu zaghachi
Aha otutu ： Email ：